Onye bụ 26 inch ịnyịnya ígwè maka? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ọpụrụiche 26 nke anụ ọhịa ugwu - otu esi edozi
Ọpụrụiche 26 nke anụ ọhịa ugwu - otu esi edozi
Onye bụ 26 inch ịnyịnya ígwè maka?
Site na igwe kwụ otu ebe ruo na obere obere egwuregwu kwesịrị ekwesị, igwe kwụ otu ebe ụmụaka abịala ogologo. Ọtụtụ nhọrọ dị ebe ahụ, anyị ga-anwa inyere gị aka ịnyagharịa ebe a na-egwu ala ka ị nwee ike ịnwe igwe kwụ otu ebe maka obere mmadụ gị) )mụaka ụmụaka dị ezigbo mma ụbọchị ndị a, m na-enwere anyaụfụ, n'ụbọchị m ị na-agba BMX dị arọ, breeki gị anaghị arụ ọrụ, ọ dịkwa, mana a na-enyo enyo inweta ụmụaka igwe kwụ otu ebe dị mkpa karịa inweta nke okenye. Ihe kwesịrị ekwesị, nkasi obi na ịdị mfe nke iji igwe kwụ otu ebe ga-eme nnukwu ọdịiche na etu etu igwe kwụ otu ebe si arụ ọrụ na ezigbo ala, kamakwa etu ụmụaka ji enwe obi ụtọ ịgba ya.
Ọ bụrụ na i lee nke a anya, ikekwe ị ga-abanye ịgba ígwè n’onwe gị, yabụ na ịchọrọ ka ụmụaka gbaa ya, hụ ya n’anya, ma rie ya ahụ. Maka edemede a, anyị na Commencal jikọtara ọnụ ịkọwapụta nke ịzụrụ gị igwe kwụ otu ebe. ihe ị ga - enweta na ihe ị ga - atụle. (upbeat music) Tupu anyị abanye na nha, atụmatụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ihe mbụ ị ga-echeta bụ na ịgba ígwè kwesịrị ịbụ ihe ọchị; Maka ụmụaka, n'ezie. Igwe ndị ahụ ekwesịghị ịbụ ihe siri ike ịgba. Ha ekwesịghị ịdị arọ, dabara adaba, toro oke ogologo, nwee ihe ndị toro eto, ma ọ bụ ọbụlagodi ịnwe akwa.
Ọ bụrụ otu a, o nwere ike ịpụta na ụmụaka gị agaghị ekpori ndụ karịa ka ha nwere. Ya mere ka anyi bido. (egwu obi ụtọ) N'adịghị ka ihe ọtụtụ ndị kwenyere, afọ anaghị ekpebi ogo igwe kwụ otu ebe, ọ na-ekpebi ogo ahụ.
Dị nnọọ ka gị na ọtụtụ ụmụaka ụdị igwe kwụ otu ebe ga - enyere gị aka ịnyagharịa ọnụọgụ ha dabere na nha, ọ bụghị afọ, ịhọrọ igwe kwụ otu ebe maka nwa gị dị ezigbo mkpa ka nwa gị gbago n'enweghị nsogbu na nkasi obi. Ọ dị mkpa ịnwe ike iji ụkwụ abụọ guzoro n’ala ka ụmụaka wee nwee ike ịzụlite nka ha ọsịsọ ma nwee ọtụtụ ọ funụ. (Obi ụtọ dị egwu) Nke a bụ otu ị ga-esi tụọ ya, mee ka nwa gị guzo na mgbidi na azụ ha kwụ ọtọ na sọks, n'ikiri ụkwụ ha n'ala, tinye akwụkwọ n'isi ha ka ha wee metụ mgbidi ahụ, jiri otu Pensụl dee ya ala nke akwukwo meturu mgbidi ahu.
Tụọ site na akara ahụ n'ala, wee gbanwee ogo ha na weebụsaịtị gị site na iji nha ndị a tụrụ aro maka ndị nrụpụta iji jide n'aka na ha enweghị nchekwa ma dị mma. Brandsfọdụ ụdị na-eji nke ahụ N’ime ogologo ụkwụ iji kwado ịnyịnya ígwè ụmụaka kwesịrị ekwesị ọzọ, mee ka nwa gị guzo na mgbidi na sọks ha wee kwado ha, debe akwụkwọ n’etiti ụkwụ ha dị ka a ga - asị na ị nọ ọdụ n’elu oche. Bugharịa nwa gị n’elu mgbidi wee tụọ ya n’ala si n’elu akwụkwọ ahụ.
O nwere ike ịbụ ihe na-adọrọ adọrọ ịzụta igwe kwụ otu ebe buru oke ibu maka nwa gị itolita, mana enwere ezigbo ihe abụọ iji gbalịa ma zere nke ahụ. Ihe mbụ kpatara ya bụ na nnukwu igwe kwụ otu ebe siri ike iji karịa na ịpụ na ịpụ na-esiwanye ike. Ihe nke abuo bu na otutu ndi na emeputa igwe igwe, tinyere Commencal, eweputala uzo nke uzo di n ’uzo di iche iche ka igha mafere ya.
Ya mere, ha nwere Ramones 14, 16 na 20. You nwere ike ịga ozugbo na 14, hapụ etiti, ma gaa 20. brandsfọdụ ụdị igwe kwụ otu ebe na-emebe igwe kwụ otu ebe na-eto eto na nwa ahụ.
Ya mere, jiri ihe omuma a, gaa na webusaiti nke onye emeputa ma choo igwe kwụ otu ebe. (Joy music) Nke na - eduga anyị n’ịgba igwe dị iche iche. Have nwere igwe kwụ otu ebe, ịnyịnya ígwè mbụ, igwe kwụ otu ebe ụmụaka na obere ịnyịnya ígwè.
Uche Comcal lekwasịrị anya na mbara ala, 100% igwe kwụ otu ebe site na igwe elekere 12 nke anụ ọhịa ahụ, ruo 14 wee nwee 14, 16, 20 na 24 ndị na-ebido ebido igwe kwụ otu ebe na obere igwe kwụ otu ebe, ezigbo ihe siri ike ọzọ, 20, 24 na 27.5 wee lelee ọgbụgba ndị a, ezigbo ịnyịnya ígwè zuru ezu, 20, 24 na 27.5 nhọrọ wiil ụkwụ Amaury Pierron na Myriam Nicole na-etolite igwe kwụ otu ebe maka ndị okenye ma kpọmkwem ya mere enwere ọtụtụ ndị nne na nna n'ime mgbidi nke ụlọ ọrụ Commencal. .
Ha na-eji umuaka ha imepe igwe ndi a ma ha na-ekwu na ha etinye otutu uche na ergonomics na geometry nke igwe kwụ otu ebe iji jide n'aka na ha di nma maka ịgbapụ n'okporo ụzọ - igwe kwụ otu ebe, ịgba ịnyịnya ígwè, na ebumnuche ebumnuche niile. (Joy music) N'agbanyeghị ụdị igwe kwụ otu ebe ị họọrọ, enwere isi ihe ole na ole na-eme ka igwe kwụ otu a dị iche na ihe yiri igwe na ezigbo igwe ugwu. Mpempe akwụkwọ fechaa na akụrụngwa.
Mkpa ọkụ pụtara njem dị mfe, na-enweghị mgbalị na ọchị. Aluminom bụ eze maka ụmụaka ụmụaka. Ergonomics maka umuaka ya mere enwere otutu ihe edere n'ezie maka umuaka, ihe dika ndi pere mpe rue aka, lelee nke a, obere oge iru breeki levers ka obere aka wee rute ha.
Obere ihe cranks na warara Q ihe mere pedal dị nso ọnụ na-ebute igwe kwụ otu ebe maka ụmụaka ka ha kwụ ọtọ ka ha ghara ịgbatị. Ọ ka adaba. Ọbụna ihe nkwado dị ala nwere etiti nke ike ndọda nke na-eme ka igwe kwụ otu ebe kwụ chịm. (egwu obi ụtọ) Ọ dịghị mkpa maka pedal mgbe ị dị obere, ụmụaka na igwe kwụ otu ebe nwere ike iji ụkwụ ha, na-agbagharị ma jiri ịgba ịnyịnya na itule.
Ọ bụrụ na ọ dị ha ntakịrị mma, ha nwere ike ịmalite itinye ụkwụ ha na obere ikpo okwu ahụ. Old nwata ka hụrụ ya n'anya bike, ọ bụ a bit kwụsịrị pedals m na-eche. Enwekwara wiil dị iche iche, ma ọ bụrụ na ịchọrọ 12 ma ọ bụ 14. wiil na-eme igwe ụmụaka na ndị na-agbanwe agbanwe n'ezie.
trek igwe nyocha
Maka na umuaka ga amuta otu esi agba igwe kwụ otu ebe, otu esi dabere na nsị na ihe ndị ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na olile anya na ha ga na-agakwa ije, ọ ga-adị mfe nfe. Warara Ogwe, kwụ ọtọ ọnọdụ, n'ezie a igwe kwụ otu ebe nwere knobbly taya na ọ bụrụ na ị na-eche n'ezie na ọ, ị nwere ike arapara a diski efe ara na azụ gị.
Mezie ịdị elu sadulu ahụ ka ụkwụ ụkwụ nwa ahụ wee dị larịị, ma jiri obere mgbada na ikpere ya. Enwere ọbụna World Balance Bike Championship iji gbalịa. Na-atụ anya ị ga-esi site na 80 ruo 200 pound maka ọhụụ ọhụụ ọhụrụ. (egwu obi ụtọ) ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya ígwè na ndị na-edozi ma ọ bụ wiilị ọzụzụ.
Ọtụtụ mmadụ na-agazi ugbu a imezi igwe kwụ otu ebe. Ha dị mma maka ịme ụmụaka ka ha mụta otu esi aga ụkwụ na ụkwụ ma kwụkwaa ịnyịnya ígwè na ya, ebe ndị na-eme ka ndị na-enyere ụmụaka aka ibili ngwa ngwa ma nyere ha aka ka ha jiri ụkwụ na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ị chere na nke ahụ bụ ihe dị mma, ma mgbe ahụ, ị ​​nwere nnukwu nnukwu okwukwe ahụ na iwepụ ndị na-edozi gị ma mee ka nwa ewu ahụ mee ya niile maka onwe ha. Eleghị anya ị ga - ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na - achọ idozi igwe kwụ otu ebe n’ụbọchị ndị a.
Echere m na ha bụ nnukwu ụzọ ụmụaka si amata otu esi ada ngwa ngwa. Ga-amaliterịrị ịme ihe ndị a ọsọ ọsọ, n'ihi ya ị nwere ike iche maka ịpụ na brakị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị nne na nna anụla na ụmụ ha hụrụ igwe kwụ otu ebe n'anya nke ukwuu nke na ha anaghị achọ ịgbagharị ụkwụ, ụmụaka niile dị iche. (egwu obi ụtọ) Ugbu a maka igwe kwụ otu ebe.
Ndị a bụ igwe kwụ otu ebe mbụ ị ga-ahụ na pedal. A ga-eme ha ka ha dị mfe ka ụmụaka wee ghara ịmụ otu oge. Nakwa na ọnọdụ kwụ ọtọ ka ụmụaka ghara ịpịpịa ma hụ ebe ị na-aga.
Na idoro n'elu sadulu ịkwesịrị ịhapụ nwatakịrị ahụ ịnọdụ ala na otu ụkwụ n'elu ala ma jiri ụkwụ na-agbada n'elu sadulu ahụ. Jide n'aka na ikpere na-agbadata ntakịrị ma jide n'aka na ọ nwere ike imetụ ala ahụ n'enweghị nsogbu. Ọtụtụ igwe kwụ otu ebe a nwere ndị nche agbụ iji jide n'aka na ihe niile zoro ezo pụọ na mkpịsị aka nwere mmasị ebe ụmụaka nwere ike ịmalite Ọzọkwa, ọtụtụ ụdị ga-enwe nsụgharị buru ibu, yabụ nke a bụ Ramones 14 Commencal, anyị nwere Ramones 16 kwa.
Ya mere, a buru ibu etiti, ibu wiil, otu mfe usic) àgwà mmiri. Ugbu a gaa na ụlọ ahịa akụrụngwa mpaghara gị ma ọ bụ ọbụna ụlọ ahịa ma ọ ga - abụrịrị na ị ga - ahụ ụfọdụ ịnyịnya na - acha ọkụ na - acha odo odo, ma ọ dịkarịa ala, ha dị ka ịnyịnya ígwè, mana ha bụ n'ezie ihe yiri igwe. Mgbe ị hụrụ igwe ụmụaka kwesịrị ekwesị site n'aka onye nrụpụta kwesịrị ekwesị, ị ga-ahụ nnukwu ọdịiche.
Ha nwere osisi aluminom na ihe na-eme ka igwe kwụ otu ebe sie ike. Ojiji nke akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka ụmụaka, nke emere maka ergonomics. Ezigbo njirimara nke ezigbo ụmụaka igwe kwụ otu ebe.
Ugbu a, Commencal na-ekwu na kokpiiti dị ezigbo mkpa inwekwu aka, ihe dịka aka aka, nha ha, ndị levers, grips na sekit, e mepụtara ihe niile ka ha wee nwee ike ịba uru maka ụmụaka. Aka na njide kwesịrị ịbụ nha kwesịrị ekwesị maka obere ahụ. Maka ogwe na aka, nke a pụtara obere dayameta ka obere aka wee nwee ike ijide.
Agaghị eme ka ha dị mkpụmkpụ n'akụkụ dị iche iche. Kwadoro brek ka ị dị nso na njikwa aka maka obere iru. Fọdụ na-arụ ọrụ dị mfe, na-eme ka braking dị obere ihe na-enweghị isi maka obere aka.
The crank ogologo bụkwa proportional na ziri ezi sadulu elu na iji nweta a ala igwe kwụ otu ebe na a otutu crank nwechapụ si nzọ ụkwụ. Yabụ na ọ bụ ogo ya, obere ka mma. Ihe warara nke Q-ihe dịpụrụ adịpụ, oghere dịpụrụ adịpụ n’etiti cranks, nke ka mma.
Nke a pụtara na ụkwụ nke ndị na-agba obere ịnyịnya na-agbago na ịgbada nke ọma mgbe ha na-akụ ụkwụ, kama ịtụgharị n'èzí. Mountainmụaka igwe kwụ otu ebe, ugbu a ha dị obere karịa, mana ha karịrị ọdịdị igwe kwụ otu ebe. Imirikiti igwe kwụ otu ebe ndị a nwere ike ịbụ nke isiike, agbanyeghị na ị nwere ike ịnweta nhọrọ na forks nkwusioru, ikekwe ndụdụ nkwusioru ikuku, yabụ ha dị mfe ma dịkwa mfe ịhazigharị ka ibu ibu na-agba.
Anyị esila n'otu gia na ọtụtụ ugbu a ka ị nwee ike mepee ebe ị ga-esi na-aga. (Joy Music) N'ebe a, Ramones 20 na 24, ha abụọ nwere igwe kwụ otu ebe. Bikmụaka ụmụaka a na-amalite gburugburu 350 pound ruo ihe ruru otu puku. (egwu obi ụtọ) Ndị a bụ igwe kwụ otu ebe kwesịrị ekwesị maka igwe kwụ otu ebe.
Couplefọdụ n'ime ihe ndị a nwekwara ike ịbụ nhọrọ dị mma maka ndị toro eto na-enweghị ike itinye igwe kwụ otu ebe. Ndị Meta Junior bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe na ụdị ị nwere ike ịkọ site na obere wiil ha nwere (ntamu) nkwanye ụkwụ na-agbakwunye njem na obere igwe kwụ otu ebe, nke a bụ 27.5 inch inch Shocks Recon Fork wheel on there. nke igwe kwụ otu ebe a. (egwu dị egwu) Meta hardtails dị na 20, 24 na 27.5 sentimita, ya mere nnukwu nhọrọ nke ịdị elu dị elu maka ndị na-agba ịnyịnya.
Na ihe na-abụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na m na mgbe hụrụ, anyịnya igwe n'ezie, nke ahụ bụ Nsogbu. Nke a bụ karịsịa 20 anụ ọhịa. Ya mere, ka anyị kwuo na m nwetara site na Nsogbu, nke a bụ obere obere igwe kwụ otu ebe. (egwu na-ada ụda) Ewezuga nke obere, enweghị nkwekọrịta ọ bụla emere ebe a, 27.5-inch anụ ọhịa nwere wiil, 160 mil na-aga n'ihu na azụ, ị nwere nnukwu brek, ị nwere Sram Guards, 200 mil n'ihu router, 180 na azụ.
Igwe kwụ otu ebe a nwere ike ịme ọmarịcha nnukwu. (Joy music) Ọbụlarị nkwusioru ka enyere ụmụaka ihe kachasị mma, gbadaa ala iji kwado ha. Dị ka Commencal kọwara, e mere Kinematic maka ndị na-agba ịnyịnya ibu.
Site n'iji oke nkesa, anyị nwere ike ịnwe ikuku ikuku dị mma na akwa mmiri. Na-enweghị nke a, ịnyịnya ígwè maka ụmụaka agaghị ekwe omume. Na-atụ anya ọnụahịa site na £ 600 ruo puku abụọ na ọkara.
Ee nke ahụ bụ ego buru ibu, ị gaghị achọta ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na ndụ gị nke ga-edobe uru ha yana ezigbo igwe kwụ otu ebe ga - eto eto. Ekele, maka Billy na Louis nọgidesiri ike nke dị ịtụnanya, ezigbo mini -Shredder. Echere na ị ga-ahụ ozi a bara uru ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ụmụaka igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ nwere nnukwu nwa mgbe ahụ ebe ahụ maka isiokwu na Blake. Nye anyị mee mbs ma ọ bụrụ na ị hụrụ obere shredders ma pịa bọtịnụ a iji denye aha.
Ha ka na-eme igwe ịnyịnya igwe 26 nke anụ ọhịa?
'26”Nha ụkwụ zuru oke maka ọtụtụ ndị toro eto nwere ogo dị elu n’elu ụkwụ isii. Ọtụtụ n'ime njegharịanyịnya igwena ngwakọanyịnya igwebia na 700C metric wiil, nke a makwaara dị ka 29-inchwiil.Eprel 25 2021
Odi mma, nabia na ajuju ajuju nke GMBN a, ihe ngosi nke anyi n’eme karie izu obula iji zaa ajuju gi. I guzo n’ihu anyị. Blake, kedu ka ị ga-esi zitere anyị ajụjụ? lelee ihe ndị dị n'okpuru ma ọ bụ zipụ ha na ask@GMBN.com.- Ee, yabụ ị nweghị ngọpụ.
Mana ka anyị ruo n’izu a n’izu. Onye mbụ, Blake si 'Bigballer' wee kwuo, sị, 'Enweghị m ike ị nweta ezigbo nguzo na igwe kwụ otu ebe mgbe m nọ n'okporo ụzọ, na-eche na m na-esote igwe kwụ otu ebe na ejighi n'aka ebe m Ekwesịrị m ịkwụsị ibu m ugboro ugboro, ka enwere ihe na-efu? '- Ọfọn, n'izu a anyị ga-aga isi, na mmalite. N’ụzọ bụ isi, hụ onwe gị ka ị na-agbatị na igwe kwụ otu ebe na aka gị gbatịpụrụ agbatị, ụkwụ kwụ ọtọ, wee zuru ike ugbu a rịgoo n’igwe gị.
Nke ahụ na-etinye gị n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Ma isi ọnọdụ ụkwụ gị na igwe kwụ otu ebe. Chọpụta ụkwụ ị na - aga n’ihu ka - I nwere, nke a bụ ihe dị ezigbo mkpa iji mee ka ihu ụkwụ gị gaa n’ihu.
Na mbido ị nwere ike ịbụ, m nọ na igwe igwe, kwesịrị inwe ụkwụ aka nri m, aka ekpe m. Ma mgbe inwere nke ahụ, ị ​​na - adịkarị nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ daa nwayọ nwayọ nwayọ wee daa jụụ n ’ọnọdụ ị maara - ee - ọ nweghị ụzọ dị mma ma ọ bụ njọ ị ga-aga. Onye ọ bụla nwere ụdị ịkwọ ụgbọala dị iche.- Ee, ee.- Nwoke a na-agba ịnyịnya dị ka onye nzuzu zuru oke.- Ma m bụ onye nzuzu.
Mana nke ahụ bụ ajụjụ ọzọ anyị na-agaghị abanye - Ee, anyị agaghị abanye n'ime ya. Gbalịa ịchọta ụkwụ ụkwụ ahụ. Ahụ na-eru gị ala na ya.
Ma hapụ ya ka ọ mee - ee - ị ga-ahụ ya. Ọ bụ banyere ịnya ịnyịnya a otutu - ee, naanị ịnya otutu. Ma zuo ike na igwe kwụ otu ebe.
Na-aga. - Ọ dị mma, ajụjụ na-esonụ. Andrew Davis na-ajụ, 'Enwere m ike ịkụpu oghere n'ime oghere aluminom m iji rụọ eriri ndị ahụ n'ime?' - Agaghị m akwado ya - mba, anyị ‘ekwuru m nnukwu ihe na nke a - Mm, nnukwu mba nka - emela ya, nihi na otu ị ga-eme ka usoro ahụ daa mbà.- Nke ahụ bụ gị.- Ọ gaghị Ma nke ọzọ, echere m, nkwa, ọ bụ eziokwu? - Eeh.
You ga-enwe, ọ bụrụ na ị mee ị ga-enwe eriri na-ama jijiji.
Gụnyere ịsụ ngọngọ, agaghị m akwado ya. - Ee, ka anyị asị mba na-egwu oghere anyị na okpokoro nke aluminium. Mgbapu olulu na okpokolo agba na-eme m ka m gaa otu a - ee. (ọchị) - Onye na - esote gị ebe a Blake. 'Ugboro ole ka m kwesịrị ịgbanwe oge opupu ihe ubi n'elu eriri igwe m?' - Na na na na.
Ọ dịghị, ọ dịghị mgbe ọ bụla. Ọ gwụla ma ị jidere ya.- Ee.- Mgbe ee.- Ee, ọ gaghị adị njọ karịa.
Ọ dịchaghị ka ujo ala - mba - ụdị ụgbọ ala emeela ochie nke ga-akawanye njọ kemgbe ọtụtụ afọ - ee, ee, ee - o yighị ka ị nwere onye na-ama jijiji nke na-eweda ala ma na-adịkwaghị arụ ọrụ. Yabụ ị naghị edochi ya. Um, ị gaghị enwe ike iji dochie ihe ọkụkụ titanium, dịka ọmụmaatụ. - Ọ dịghị ụzọ - Ọfọn, belụsọ na agbajiri ya. - Eeh. - Ọ bụrụ na anaghị agbajikwa ya - Edozila ya - Ọ bụ ya A.
Um, Arlington Guy jụrụ, oh ọ dị ụkwụ isii n'ogologo - Woah - ọ nọ na Stumpie XL nwere ụkwụ 29. Ọ na-ajụ, 'Amaara m na ị bụ onye mgbochi 29ers.' Woah - Woah.
Adịghị m onye mmegide 29er. N'ụzọ ụfọdụ, ọ bụ. Enweghị m - Anyị na-eche ma setịpụrụ a megide 29er - Ọ masịrị m 29er - O yiri ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya maka ụmụ okorobịa buru ibu na-agba ịnyịnya ibu, ọ dị. 'Ì chere na ọ bụ ịdị elu na ịdị arọ kwesịrị ikpebi otú ọ hà? '- Ee e, ọ bụchaghị - Ee e, m na-ekwu, ị bụ ụkwụ isii - Ee, abụ m ụkwụ isii. - feetkwụ isii.
Feetkwụ anọ isii, ihe yiri ya.- Ise atọ.- Um, na.- Amaghị m.- You hụrụ 29 gị n'anya.
M chụpụrụ ihe ngosi ọhụrụ ahụ.- fell hụrụ ya n'anya.- M hụrụ ya n'anya, ee.
Echere m na ọ bụ naanị ụzọ m na-anya, m ga-ahọrọ 27.5 mana enweghị ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ.- Im XC bụ gị.
Hụ ọtụtụ ndị na-agba ọsọ XC kacha mma. Obere ụmụ agbọghọ - na ha dị obere - na nnukwu 29ers ma ha na-arụ ọrụ, mana nke ahụ bụ ezigbo isi n'ihi na mụ na Greg Minnaar nwere mkparịta ụka na Fort William afọ a. Ọ nọ na ohuru 29 nke anụ ọhịa Santa Cruz V10.
O wee kwuo okwu nke aka ya, 'Emechara m nwee igwe kwụ otu ebe dabara m.' .Ọ bụrụ na ị bụ nnukwu mmadụ mgbe ahụ onye 29er nwere ike ịrụ ọrụ maka gị.- Ee, ee.- Gbalịa ya.- Donnie hụrụ ya n'anya na o togoro ụkwụ isii.- Ee, kpamkpam.
Nri, nke a bụ ezigbo ihe maka gị, Blake. Charlie Murray zigara, ọ dị afọ iri, ọ na-agba ịnyịnya Saracen.- Nice.- you nwere usoro ịwụ elu ọ bụla ọ ga - amụta? - Yo, m nwere ike ịmụ ọtụtụ aghụghọ dị mfe.- got nwere akpa aghụghọ, ọ dị omimi.
Ọ dị ka akpa Mary Poppins.- Ọ dị.- Kee p tinye ogwe aka ya n'akpa.- Gwuo ya, gwupụta ya.
Yabụ ị nwere ike ibido site na otu ihe nhicha, tebụl, otu ụkwụ. Ọ dịghị ụkwụ, ihe ọ bụla.- You're na-achọ ịmụta nke ahụ ugbu a, ọ bụghị ya? Enweghị ụkwụ? -Ee, enweghị ụkwụ, ee.-will ga-enweta ya, ị ga-enweta ya.- Enwere ọtụtụ. - Ekwuru m, ị mere edemede dị ịtụnanya gbasara aghụghọ asatọ ị kwesịrị ịmụ dị ka onye mbido na ịwụ elu, wee lelee nke a na ikuku.
Nke a bụ Otu Aka, Otu erkwụ, Tebụl. Nke ziri ezi, aghụghọ ọzọ a adịla ochie ma eleghị anya ọ maara ihe niile gbasara ya. A na-akpọ ya X-er.
Yabụ aghụghọ ọzọ a bụ Ọ nweghị ụkwụ. Otu Onye Otu Footkwụ. Ihu bu oke azu.
Nke a bụ toboggan. Ajuju ju oke oso. Blake, Onye Na-anwụ 'Ọ nwere ihe ọ bụla dị njọ na ịzụta igwe kwụ 26? Amaara m na ọ ga-abụrịrị oge, mana ịntanetị dị ka ọ dị ha ka ọ dị mma dịka 27.5'- Huah.- Ọfọn.- 26 anwụghị.
M ka na-agba ịnyịnya ígwè 26 nke anụ ọhịa. - Eeh. Echere m, wiilị 26-inch abụrụla ihe dị ka afọ 30 - ee ee - ha na-arụ ọrụ nke ọma.
Ha bụ n'ezie na nke oge.- Ee e- The ụlọ ọrụ, na okwu nke ọhụrụ anyịnya igwe, na-doro anya na phasing ha .- Ee, ee.- Ma nke ahụ apụtaghị na ị gaghị jidere a nnukwu igwe kwụ otu ebe.- Mba ị gaghị enwe ike ị nweta ezigbo ahịa.
Ha dị oke ọnụ - O doro anya na n'ihi na a na - ewepụ ha - Ee - Nnukwu ọnụ ahịa maka 26 inch wiil - Ee, ee - Ya mere, ọ bụghị echiche ọjọọ. Ha dị ka ndị ara ugbu a n'ihi na anyị niile ejirila 27.5.- Ee, ha dị ka obere.- Ee.- M na-aga ele anya na m adịghị ọcha ma m dị ka, 'Woah, nke a bụ obere . - Eeh.
Look dị obere. Ma ha ka na-arụ ọrụ. Na-ekwu maka obere esemokwu.- Ee.- I kwuru, ọ bụghị ya, na 29 bụ afọ mmalite maka mgbada.- Kpọmkwem maka mgbada.- Ọ bụghị na nzuzu.- Oh no, 27 ga-agabiga. - Ọ bụ wiilị gburugburu, na-agagharị.- Kpọmkwem.- Dị ka ndị ọzọ.- Ma enwerekwa wiilị 26 nke anụ ọhịa, ikekwe ọ dị mma maka onye mbido.- Yep .- Nwa okorobịa.
Nwa nwoke. Onye ọ bụla n'ezie. Ọ na-amasị m - ee - ee.
Ọ ga-amamiihe na ihe ọ bụla. - Ee, 26 nwụrụ anwụ. Kpamkpam kwesiri ile anya, karisie ma oburu na icho ahia.
MaxMan na-ekwu, 'M na-adịbeghị anya zụtara a Cube Ofụri Esịt 160 Njem. Mmiri na-akụda mgbe niile. 'Oh mba - nke ahụ adịghị mma - ọ bụ ezie na o mere ka ụgbọ mmiri ahụ nwee nrụgide a tụrụ aro.
Ọ gbakwụnyere ntakịrị. Nwere ike ịkwado itinye akara ole na ole? - M ga-asị ee. - Kpamkpam. - Ka o sina dị, tinye ibu ha n'ebe ahụ.
Dabere n’otú ibu gị dị. Tinye ego ziri ezi. Chọghị ịgafe Ihe ọ bụla ego a tụrụ aro ya bụ.
Na ujo gị nke ị nwere - Ee. Adịghị m ọkachamara nkwụsị, yabụ ajụrụ m Doddy banyere ya n'isi ụtụtụ wee kwuo dị ka, 'Ee, mee ya. Ọ dị oke mfe ịme. ”O mere ya n'ezie.
Lee anya na nke a. O mere ya na ngwụsị ụka a n'ihi ụjọ ya. Kwuru na o were nkeji iri. - Lee anya na.
Ọ bụ ụzọ dị mma - ee. Ya mere ee, zụrụ onwe gị mkpọ nke tokens - ee - Andrew Brown. 'Have nwere ndụmọdụ ọ bụla banyere otu esi aga nke ọma na mgbọrọgwụ ma ọ bụ ubi okwute?' Achọghị m.
Dị ka onye na-amu amu ka na-amụ ihe, ụjọ na-atụ ya ka ọ na-abịaru nso ngalaba ọhụụ dịka nke dị n'okporo ụzọ ahụ. Ọ na-emekwa ka ọ bụrụ obere ihe mgbochi ugwu. - Eeh.
Emee m. - Blake, olee otu ị ga - esi gbochie nke a? - Ọfọn, ị kwuru na ọ bụ ngalaba ọhụụ, yabụ, ihe kachasị mma bụ itinye igwe kwụ otu ebe n'akụkụ ụzọ. Ma gafere.
Họrọ akara gị. Maka na ihe kachasị mma bụ ịchọta akara ziri ezi site na ogige nkume ma ọ bụ mpaghara mgbọrọgwụ. N'ihi na ọ bụrụ n'ịhọrọ ahịrị na-ezighi ezi ọ ga - akwụsị kpamkpam.- ee, ị ga - akwụsị kpamkpam.- ma eleghị anya ị gaghị enwe mmasị na nkume ruo mgbe ebighi ebi. - ee, ma ị chọghị ịhapụ ihe a gaa chioma. - ee .- won't gaghị adị mma na ya n'ụzọ ahụ.
Ga-enweta ya nke ọma site na ịghọta ụzọ dị n'ihu gị.- Ee.- Nke ahụ pụtara na ị ga-eme ya Lelee ya tupu ị kụrụ ya.- Ee.- Ekwela tinye ya, gaa ngwa ngwa.- Naanị gaa ọsọsọ. (ọchị) - Ọsọ abụghị azịza ya mgbe niile.- Mba, mba.- Mgbe ụfọdụ ọ bụ.- Ee.- Ma ọ ga-abụrịrị na ị mere mkpebi a.- Ee. (Ọchị) Omume, omume, omume.
Jide ya - Ee, ntakịrị, ntakịrị, lelee usoro ahụ. Marek Nadymacek kwuru, sị: 'Olee otu m ga - esi bụrụ ọkaibe enduro onye na-agba ịnyịnya? 'Ọ meela afọ iri na asatọ na-agba ịnyịnya ugwu ruo afọ atọ. Um, ụzọ ụkwụ, otu ụzọ ụkwụ, ọkara jumps.
Oh, daalụ maka azịza ya. A sị na m nwere azịza dị mfe - ee. Anyị dịka ndị ọkachamara were ọtụtụ afọ - ee - ị were gị oge dị ukwuu.
Iji ruo ebe anyị nọ, n'ọkwá anyị, ọ were ọnwa na nraranye, ịhụnanya na ihe niile. Mmerụ ahụ.- Ee.
Ọ na-ewe nnukwu okwu niile; ike, itinye uche, lekwasịrị anya - yep. Okwu niile- buo ibu okwu nke putara ihe.- Ee.- Maka na ọ bụ eziokwu.
Naanị ị ga-etinye oge dị ukwuu. - Mkpebi.- Naanị agụụ.- Ee.- Nnukwu agụụ na-agba ịnyịnya onwe gị.- Ọ na-eme.- Um, nke ahụ bụ ihe anyị 'dị ka ndị ọkachamara' na-enye.
Ọfọn, echere m na anyị ka na-aba uru - ee - naanị ụdị uru dị iche iche-ụdị dị iche iche, ee-mana m bụ ụdị pro dị iche. (Ọchị) Mana gịnị kpatara na anyị anaghị ajụ maka uru a anyị bara? Lee isiokwu a - Downhill onye mmeri ụwa ugboro anọ onye mmeri ụwa.EWS onye mmeri.
Ugboro abụọ downhill World Championship, otu oge Southwest BMX onye mmeri.- M malitere ịnya ịnyịnya mgbe m bụ 14, nke dị ezigbo oge.
Ma, mgbe m dị afọ iri na ise, m gbanwere ozugbo. N'ime afọ ndị nọ n'ugwu ndị dị n'elu Monte Carlo, enwere m ohere ịnweghachi iko mba ụwa na okpu. M ka meghere ọsọ ahụ ma nwee obi ụtọ n'ebe ahụ.
Ma nwee ohere izute ụfọdụ ndị nkwado ma nwee otu site na otu ndị US na-akpọ Sen, nke bụ otu n'ime nnukwu ndị egwuregwu anyị batara n'egwuregwu ahụ wee bịanye aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ m - Blake, ọ bụ ngwa ngwa ngwa nke Fire Kwadebe onwe gị - Eeh. (Adịgboro ụda egbe) Fire pụọ - Ajụjụ mbụ sitere na Poolehart. Ọ na-ekwu, sị, 'Tinye aka Neil ruo ókè ị nwere ike.
Dekọ usoro ọgwụgwọ gị dị oke mkpa dịka ihe ọ bụla ọzọ. 'Nke ahụ bụ ya ma anyị ga-Ee. Anyị ga.
Ajụjụ ọzọ. ”Ka Neil na-eme edemede“ How to Crash ”edemede ya daa,“ Poor chap. Ọ naraghị ya - nke ahụ ziri ezi.
Ọ dị ngwa ngwa Neil - gbakee n'oge na-adịghị anya Neil - John Galvan kwuru, ', nwere ike itinye ndụdụ nkwusioru na-agba n'okporo ụzọ?' Ọ bụrụ n ’ịchọrọ (ịchị ọchị) - ọ bụrụ n’ ịchọrọ - ọ bụrụ n ’ịchọrọ. - Otú ọ dị, ụfọdụ nke obe anyịnya igwe nwere nkwusioru. - Ee ụfọdụ. - dofọdụ na-eme ya. 'Gịnị dị iche ọ na-eme ma ọ bụrụ na ị nwere taya n'ụzọ na-ezighi ezi?' Jiri nwayọ.
Ikekwe obere ijide- Ọtụtụ obere ijide.- Dabere na taya.- Ọtụtụ obere ijide.- Ha dị nwayọ nwayọ.- Ee, ndị mmadụ ga-achọpụta ma kpọọ gị onye nzuzu.- Ee.
Ma ọ bụ ihe ihere. (Ọnụ 'M mere ya') - Jordan McCal na-ekwu, 'Ọ bụrụ na m ga - eme' 2 Buy 'm ka ọ bụrụ' Otu Site '? Ọ bụrụ na ị chọrọ.- Ọ bụrụ na ị chọrọ.- Ntak-a? - Ee, gaa na ya - Ee.- Gaa n'ihu Blake.- 'Kedu ihe ị ga-akpọ igwe ọkụ ma ọ bụ dị arọ?' Ana m aga n'etiti.- Ihe niile dị n'etiti.- Ee.- Ana m asị na amalitere m ịgba ịnyịnya ugwu mgbe ha niile gbasiri ike.
Yabụ na mụ niile ha dị mfe. - N'oge ahụ, olee mgbe 19 ahụ dị? - Ọ bụ na 19s. Nu nwere ike kuziri ụmụ nwoke GCN otu esi eme ngwa ngwa ọkụ? Ee anyị nwere ike - Anyị gbalịrị.
Anyị na-eme ya ugbu a. - Eeh. Maghị etu esi eme ya.
Ajụjụ ọzọ. “You nwere ike ịde akụkọ banyere rim iji kwado ndị na-agba ịnyịnya ibu?” Ma nke ahụ sitere na Rene Gomez.- Rene Gomez.
Amaghị m ma anyị nwere ike ime ya. - Ee.- Anyị na-achọ nnukwu mmadụ.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọta otu - Doddy dị ogologo. - Anyị ga-etinye ya n’elu igwe kwụ otu ebe.
Ikekwe anyị nwere ike ime ka ọ rie ọtụtụ nri. Ka anyị gaa, ọ bụ ya. Ngwọta.- Eme.- Reece Wright na-ekwu, sị: 'Ndi 150 dị n'ihu na 140 azụ zuru ezu iji kwụsị njem Enduro?' - Ee.- Ọ bụ ya.
Jack nwere mkpịsị aka ukwu. - Ọ na - enye mkpịsị aka aka ya. - Ọ dị mma ịga, dude.- Ee, zuru oke.
Nri, ajụjụ ikpeazụ site na, ị nwere ike ikwu nke ahụ? - Guilherme Cameira.- Ka anyị pụọ. 'You dara ada ma chekwaa Neil Special? 'Ooooh. - Ikekwe ọ bụghị.
Ọ bụ ntakịrị ntakịrị. - Ọ bụ ntakịrị ntakịrị. - N’oge na-adịghị anya, abịakwa n’oge. - Ọ bụrụ n’ịle anya na Instagram ya, ọ ka na - eme ka nkwonkwo ụkwụ ya. - Ka anyi nwetaghachi ya n’otu uzo. - Eeh. - Nice na nchekwa.
Ma anyị ga-eme ya mgbe ahụ. - Na-emekọ. - Anyị mere ya site na ngwa ngwa nke ọkụ enyi.
Nwoke mara mma. Ezigbo mma ma ọ bụrụ na anyị mee. Jụọ n'ihi na anyị na-ahụ mgbe niile ka onye na-agba ịnyịnya.
Dozie m ma ọ bụrụ na m mejọrọ .- Ee.- Ya mere ka anyị mee ya ugbu a.- Mhm.- Ma anyị nwere ike ịnwale ime ka ịnya ịnyịnya gị ka mma, obere nwayọ- Nweta ntakịrị ntụnye aka.- Mee ihe n'ihu .
Ọganihu. Ọ bụrụ na anyị nwere ike.- Ee, ee.- Ma n’izu a anyị ga-anwale Marwan Balarby.
Ọ na-anyakwa ebe mgbọrọgwụ. Ọ chọrọ ndụmọdụ maka otu esi emezi nke ahụ. Ya mere, ka anyị leba anya - lee isiokwu a - hụ ya ka ọ na - abịa - hụ ya ka ọ na - abịa, enwere m ike ịhụ mgbọrọgwụ - Marwan's Aga m ụdị mpịakọta na ogbugba.
N'ebe ahụ ka ọ nọ. Na. Oh! Kedu ihe ị chere ugbu a? Ka anyị lelee ya ọzọ.- Ee, ka anyị lelee ya ọzọ.- Ọzọkwa.
Ọ maara ihe ọ na-eme.- Ezi ọsọ.- Ọ na-ehicha ha ebe ahụ.
Ọ dị mma, enwere m ihe ole na ole m ga-eme. Aga m asị na ije ahụ dị mma. - Ije ije dị mma.
Ihe ijeụkwụ ahụ ziri ezi. Otu ihe ahụ na-abata. Echere m na ọ ga-ahapụ m obere oge tupu oge. - Ọ na-ahapụ obere tupu.
Gaara eji nke ahụ? - M gaara eji mgbọrọgwụ ya. Echere m na ị ga-apụ tupu? - Ọ agbagha? - M gaara awụlikwa elu. - Eeh.
Ugbu a, lee ihe m chere na ị nwere ike ịmụta na nke a, Marwan, na ọ bụghị mgbe niile ka ụzọ esi eme ihe. Echere m na mụ na Blake, ọ bụrụ na m na-ele obere obere vidiyo, ha abụọ nwere echiche dị iche iche - Ee. - Nke ahụ ga-abụ ọrụ.
Mana echere m na ị nọ n'etiti isi ihe abụọ ebe ị nwere ike ịga. I ghaghi ịga tupu. - Ee. - Fọrọ nke nta ebe ị na sere ihu gị elu, ebe gị azụ bụ.- Ka ha na-akpọ ya American ewi Hop.- Ma tupu-hopped ya.
Ma ọ bụ ọ ga-abụ na m ga-eji mgbọrọgwụ n'onwe m n'ihi na m hụrụ n'anya ịkpụ ụkwụ ụkwụ m n'ihu.- Ee, jiri nke ahụ dị ka kicker.- Ọ ga-abụ na m ga-echere obere oge ma jiri aka dozie ya.
Mee ka ụkwụ azụ ahụ rụọ ọrụ ntakịrị. - Eeh, eeh. - N'ihi na enwere m mmasị Da-Da-Da, na mgbọrọgwụ.- Ee.- Um.- Nke ahụ dị mma.
Ma, m na-eche na ha Usoro bụ ewi iwuli elu. Chọghị iburu igwe kwụ otu ebe - ee. Ya mere, ịchọrọ ndị nwere ụkwụ abụọ - jiri obere mgbọrọgwụ ahụ kụtuo onwe gị, ma ọ bụ buru ụzọ, ụdị bekee America na ya - ee.
ịgba ọsọ n'okporo ụzọ
Mana gbasara ọsọ, ị nwetara ya nke ọma. Yabụ nwale ya obere oge. Lelee ya obere oge.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike. Nke ahụ bụ ezigbo oke ike n'oge a - ee - nwere ike ọ gaghị abụ maka gị. Ma ee.
Jiri obere egwu ya gwuo egwu - ee, jiri usoro abụọ a gwuo egwu - wee hụ ma ọ ga - enyere gị aka imeziwanye. Biko mee ka anyị mara. Nwee obi ụtọ na-arụ ọrụ site na ajụjụ gị.
Mee ka ha diri gi na email ka ajuo na ask@gmbn.com. Can nwere ike iji akara #askgmbn.
Ma obu n'ezie ị nwere ike ịhapụ ha na ngalaba nkọwa n'okpuru isiokwu a ma anyị ga-eleba ya anya n'izu na-abịa. Biko biko juo. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ edemede anyị ọzọ, pịa ebe a ka ịlele Blake‘ BingBomb ’Samson ebe a Megavalanche na - eme‘ Can Doddy Gbaa ịnyịnya ’ebe a. - Eeh, mana pịa ụwa ozugbo ịdenye aha GMBN, biko, maka na anyị ga-achọ inweta ha.
Nye anyị mkpịsị aka aka.
Bụ igwe elekere iri abụọ na isii nke ndị okenye?
Enwerekaọ dịghị ihe dị njọ na a26″ Wiilịigwe kwụ otu ebe,26″ Wiildịike, ìhè, naimen'ihi na a nnọọ nimbleigwe kwụ otu ebe. A na-ekwu nke ahụdịihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọhụrụanyịnya igwea na-ere ya26″ Wiil ọzọ ma ọ bụ ezie na wiil na tayagadị maka ndozi maka ọtụtụ afọ.
A bịa n’ịzụ igwe kwụ otu ebe, ịhọrọ oke nke kwesịrị ekwesị dị ezigbo mkpa. Enwere ọtụtụ ntọala dị iche iche ị nwere ike ime na igwe kwụ otu ebe gị dị ka azuokokoosisi, oche, ọbụnadị oche ma ọ bụ ogologo crank - mgbanwe dị iche iche ị na-eme na igwe kwụ otu ebe ga-emetụta arụmọrụ na mmetụta. Zụta igwe kwụ otu ebe nke pere mpe ma ọ bụ buru oke ibu agaghị adị mma.
Anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ oke igwe kwụ otu ebe maka gị. (Joy electronic music) - Tupu anyị amalite, ka m kọwaa sizing. N'ihi na ọ naghị adị mfe ịchọpụta igwe kwụ otu ebe dabere na ogologo gị.
Ọtụtụ ndị nrụpụta ga-akpọ igwe kwụ otu ebe ha nha nha obere, ọkara, nnukwu, wdg Ma ndị ọzọ ga-edekwa ha nọmba. Ndị a n'ozuzu ha sitere na 48 ruo 62, nke ahụ dịkwa ka ịtụ nha na sentimita asatọ site na nkedo dị n'okpuru ebe a dị n'elu nke elu tube ahụ.
Agbanyeghị, ọ nweghị ihe na-agbanwe agbanwe dị ka ndị na-agba ịnyịnya si ele wiil ha. Naanị n'ihi na ịnwere 54 oge niile n'otu akara apụtaghị na 54 si na akara ọzọ ga-adabara gị. Irè oche tube ogologo bụ nanị otu n'ime atọ n'ezie ụzọ dị mkpa iji tụọ igwe kwụ otu ebe ọzọ.
Wayszọ abụọ ọzọ ị ga-esi tụọ igwe kwụ otu ebe bụ nke a maara dị ka iru na nchịkọta, ndị a bụkwa ụkpụrụ ndị mba ụwa matara. Ihe iru a na-ezo aka n’ahịrị etiti site na ihe nkwado dị n’ala ruo n’etiti akara nke isi ọkpọ. Na nchịkọta gị nwere njikọ yiri nke ahụ. ma mgbe ahụ, ọ gụnyekwara ịdị elu nke igwe kwụ otu ebe.
Ọ nwere ike ịda ụda ntakịrị, mana enwere olile anya na ndịna eserese gị ga - enyere aka. Odi ka izuta uwe ogologo ọkpa. Pants na-abịa n’úkwù, mana ha na-ejikwa ogologo ụkwụ abịa.
Na, dị ka ịzụ uwe ogologo ọkpa, ịkwesịrị ịnwale n'ọtụtụ abụọ ma ọ bụ gbagoro ọtụtụ igwe kwụ otu ebe iji chọta ihe kwesịrị ekwesị maka gị Ka anyị tụlee otu isi ihe dị mfe ma bụrụ isi. Ọfọn, gịnị bụ ogo sadulu anyị na kedu ka anyị si achọta ya? Ugbu a ọ dị mfe ịchọta mgbidi dị otú ahụ, banye igwe kwụ otu ebe, tinye aka abụọ na aka ahụ, pịa pedal ruo elekere isii. Ugbu a tinye ikiri ụkwụ gị na pedal.
Now kwesịrị ugbu a chọta ụkwụ gị kwụ ọtọ. Mgbe ahụ ị nabatara ya ma weghachite ya n'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-ahụ na ụkwụ gị dị ntakịrị ntakịrị. Ọ dị mfe n'ezie ma ọ dị oke irè n'ịchọta ihe ịnyịnya kwesịrị ekwesị maka gị - ingchọta ogologo ihe ndozi kwesịrị ekwesị dịtụ mfe na nke ahụ bụ n'ihi na ị nwere ọtụtụ leeway iji gbanwee.
N'ihe banyere idozi iru gị, ị ga - amachaghị nke ọma na mgbanwe ị nwere ike ịme, n'agbanyeghị na ọ ga - adị mkpa maka nkasi obi gị na igwe kwụ otu ebe. Ugbu a dịgasị iche iche nke anyịnya igwe dị iche iche n'ime a emeputa, kamakwa site ika ka ika na nke a dabere na ụdị nke na-agba ịnyịnya ígwè na-ezubere maka, kamakwa na nke gị igwe kwụ otu ebe d. hụ e France n’ozuzu oke ogologo ma dịkwa oke ala.
Ọ bụ ezie na igwe ajịrịja ajị anụ dị mkpụmkpụ ma too ogologo. Nọmba ndị metụtara etu igwe kwụ otu ebe si eme ka amaara dị ka tojupụtara ma rute, ọ bụrụ na ị cheta ndị ahụ na-agba ịnyịnya ígwè n'oge gara aga, ị nwere ahụ iru ala karịa ịnya ịnyịnya, ma ọ bụ obere obere mgbanwe, ị nwere ike ịhọrọ ihe dị mkpumkpu ma to ogologo. N’aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị gbaa ọsọ, o nwere ike ịbụ na ị ga-ahọrọ ihe toro ogologo na ala.
Dịka ọmụmaatụ ụdị geometry dị iche iche, Canyon kewara igwe kwụ otu ebe ya atọ n'ime ụdị dị iche iche, Pro, Pro Sport, na Sport Geometry. Yabụ kedu ka ị ga - esi kpebie ebe aka gị ga - aga? Ọfọn nke ahụ ga-adabere na ihe ole na ole. Ọ bụrụ na ị nwere ogologo aka na ogologo azụ, ma nwee ike na-agbanwe agbanwe, ị nwere ike tinye onwe gị n'ọnọdụ dị ogologo, obere.
Ọ bụrụ na ị na-erughị mgbanwe ma ọ bụ nwere a mkpumkpu azụ na ogwe aka, mgbe ahụ, ndị na-abụghị n'ezie bụ n'ezie ikpe. N'ikpeazụ, ụdị ịnya ịnyịnya ị ga-eme dịkwa mkpa; Otú ọ dị, ọ bụrụ na sadulu ahụ dị n'ọnọdụ ziri ezi, ubu na akuku ụkwụ kwesịrị ịdị ogo 40 ruo 45 na ntanetị n'okpuru wiil ndị ahụ, na ogwe aka gị 80 ruo 90 ogo n'elu ogwe Youkwesịrị ịhazigharị mkpanaka gị, nke a dịtụ mfe ma dịkwa mfe site na ịhazigharị ebe ndị dị anya, na-akụtu ha ma na-etinye ha n’okpuru ka ha bulie mkpanaka gị aka ma ọ bụ belata ya. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazigharị usoro ahụ, ọ ga-esiri gị ike karị.
O yikarịrị ka ị ga-azụta azuokokoosisi ọhụrụ ma ọ bụ, n'ọnọdụ m, gbanwee ntọala ntọala niile. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazie mkpịsị ụkwụ gị karịa sentimita abụọ ma ọ bụ karịa, ị nwere ike inwe ogo etiti dị iche. Ma mgbe i nwere ike slide gị sadulu azụ na-apụta a ole na ole sentimita asatọ, ọ dịghị mgbe a ga-eme iji belata gị apụghị iru.
Akpịrịkpa gị naanị ụkwụ ga-achịkwa gị, yabụ tinye ya n'ọnọdụ ziri ezi wee hapụ ebe ahụ. (obi ụtọ kọmputa) - Ya mere, ịchọtala igwe kwụ otu ebe ị hụrụ n'anya nke ukwuu, mana ị nọ n'etiti nha. Ikekwe ọ bụ 54 ma ọ bụ 56, ọkara ma ọ bụ nnukwu.
Ugbu a ọdịiche dị n’etiti igwe abụọ a bụ nchịkọta na oke. Ogologo ya bụ nke a, na nchịkọta dị ebe a. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ogologo, ị ga-enwe nnukwu oche oche, nke pụtara na ị ga-achọ aka ahụ ntakịrị elu, yabụ nchịkọta ahụ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ igwe eji ekwo ekwo nwere mmetụta mara mma, ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ga-ahọrọ obere igwe kwụ otu ebe na tinye ogologo azuokokoosisi.
Agbanyeghị, ọ bụrụ n ’ịchọrọ ọnọdụ kwụsiri ike ma kwụ ọtọ na igwe kwụ otu ebe, mgbe ahụ, jiri igwe kwụ otu ebe a gbagoro maka nnukwu igwe kwụ otu ebe. Mee elu mee ala, ị nwere ike ịhọrọ etiti etiti dabere na ogo gị na ogo gị, mana ị kwesịrị ịchọpụta ụdị ụdị ịchọrọ. You chọrọ ogologo na ala ma ọ bụ ị chọrọ ziri ezi? Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye ya nnukwu mkpịsị aka ukwu na maka esi nweta isiokwu, gịnị ma ị pịa m?
Ngwongwo 26 nke anụ ọhịa ahụ dị mma maka m?
Yabụ,26 sentimita asatọwiil, na aigwe kwụ otu ebeonodu, enwere ikeezimaka onye gbara gburugburu 4′10 ″ -5′2 ″ iji nweta nguzozi kacha mma n’etiti ibu, ikike ịgbanye, na njikwa. Nke a kwuru, maka ịgagharịigwe kwụ otu ebena pavement, e nweghị n'ezie ịgba otú onye na-agba ya nwere ike ịbụ.
Ekwesịrị m ịnweta igwe kwụ otu ebe nke 26 ma ọ bụ 29?
N'ihi na29erwiil wheel tụgharịa n'elu mgbochi nnọọ mfe karịa26'wiil, ọtụtụ29erndị na-agba ịnyịnya na-achọpụta ngwa ngwa na ha anaghịzere izere mgbọrọgwụ, ruts, nkume, stumps, ect. na ha na-emebu na ha26''igwe kwụ otu ebe. Ihe a niile na-agwakọta n'ime aigwe kwụ otu ebenke ahụ na-adịkarị mma ma na-agbakwunye ọkwa nke obi ike ndị na-agba ịnyịnya.
Kedu nke ka mma 26 27.5 ma ọ bụ 29er?
Na26incher bụ Mkpa ọkụ ka27.5 ma ọ bụ 29inch, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na, nke ọma, enwere obere ya. N'ịbụ ndị na-nta, Mkpa ọkụ na ndị ọzọ agile, anyịnya igwe na26”Wheel-enye ọtụtụmmaosooso karịa ndị ogbo ha buru ibu, na-eme ka ọ dị mma maka mkpụmkpụ, ịrị elu na ọsọ ọsọ ọsọ, ụzọ ụkwụ na-atụgharị ngwa ngwa.Bọchị 8 2016
Ọ kwesịrị m ịnwe igwe kwụ otu ebe nke 26 ma ọ bụ 28?
Ihe kachasị mkpa bụnwetaa etiti na gị na nwere a ala jiometrị. Ọ bụrụ n ’ịbụ onye na-erughị 170cm ma ọ bụ karịa n’ogologo,26'wiil nwere ike inwe nghọta karịa na aigwe kwụ otu ebena obere. Na obere nha ọ na-abịa26'wiil na28'wiil na nnukwu nha.13.05.2014
Otu igwe kwụ otu ebe 26 gbara m obere?
Yabụ,26inch wiil, na ugwuigwe kwụ otu ebeIhe gbara ya gburugburu, nwere ike ịdị mma maka mmadụ gburugburu 4″10 ″ -5′2 ″ iji nweta nguzo kachasị mma n'etiti ịdị arọ, ikike ịpịgharị, na njikwa. Nke a kwuru, maka ịgagharịigwe kwụ otu ebena pavment, enweren'ezieenweghi oke ka onye na-agba ya ga-eto.
Ekwesịrị m ịnweta igwe igwe 26 ma ọ bụ 27.5?
Na26incher bụ Mkpa ọkụ kaOgbe 27.5ma ọ bụ 29 nke anụ ọhịa ahụ, n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na, nke ọma, ọ dị obere karịa ya. N'ịbụ onye pere mpe, dị fechaa ma nwekwuo ike,anyịnya igwena26”Wiil na-enye osooso ka mma karịa ndị ibe ha buru ibu, na-eme ka ọ dị oke nkenke, nrịgo dị elu na ụzọ ọsọ ọsọ, ụzọ ntụgharị ọsọ ọsọ.08.02.2016
Ekwesịrị m ịnweta igwe kwụ otu ebe 26?
Dị ka 29er & 27.5 'anyịnya igwe,26''anyịnya igwena-enye ha onwe ha pụrụ iche uru na ọghọm. N'ikwu okwu n'ozuzu,26''anyịnya igwedị mma maka ụdị ọsọ ọsọ ọsọ nke chọrọ ka onye na-agba ya nwee ike ịme ngwa ngwa.
Enwere igwe kwụ otu ugwu pụrụ iche maka ọrịre?
Ndị ọzọ na-arụ ọrụ pụrụ iche dị elu ugwu pụrụ iche maka ire ere nwere ike ịgụnye ụdị nkwusi zuru ezu dị ka P Slope, Stumpjumper ma ọ bụ Enduro Comp, yana ụdị siri ike dịka Crave na Rock Hopper Comp. Newdị ọhụrụ ọhụụ a zụtara na saịtị anyị gụnyere nchebe ikike ma kpuchie iwu nkwụghachi.
Kedu nnukwu igwe ịnyịnya igwe 26 nke anụ ọhịa?
You nwere obere mgbaaka nke mepụtara wiilị ha mana ha adịbeghị nkwadobe maka ọtụtụ igwe kwụ otu ebe toro eto? Ozi ọma ahụ bụ na n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ụdị na-enye ndị na-eto eto igwe elekere 26 nke anụ ọhịa ahụ yana nke ịnyịnya igwe 27.5 nke nwere obere okpokolo agba iji dabara obere ndị na-agba ịnyịnya.
Kedu nke kacha mma ịnyịnya ígwè 27 nke anụ ọhịa?
Pivot Cycles nwere 27.5 Les, Mach 4, Mach 5.5, Mach 6, na Switchblade okpokolo agba niile na-emepụta na XS etiti. Site na ọtụtụ nhọrọ, enwere nhọrọ maka ụdị ịnya ịnyịnya. Onye ahụ dị larịị na ndụ gị nwere ike ịgba ọsọ na obodo obe na hardtail (Les) ma ọ bụ cushier, kwụsịtụrụ Mach 4.